Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Itoobiya oo hawlgal lagu dilay – AfmoNews
Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Itoobiya oo hawlgal lagu dilay
Dowladda Itoobiya ayaa xaqiijisay in hawlgal militari lagu dilay afar xubnood, oo uu ka mid yahay Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda ee dalkaasi, Seyoum Mesfin.
Xubnahan ayaa ka tirsanaa Xisbiga Tigreyga Itoobiya ee TPLF, dilkooduna waxaa uu ka dambeeyay, ka dib markii ay iska diideen in ay Ciidamada Militariga isu soo dhiibaan.
Xubnaha kale ee hawlgalka lagu dilay waxaa ka mid ah nin magaciisa lagu sheegay Abey Tsehaye, oo ka mid ahaa Saraakiisha sar sare ee TPLF.
Seyoum Mesfin ayaa muddo dheer Wasiirka Arrimaha Dibadda ka ahaa Xukuumaddii Meles Zenawi, waana mid ka mida shakhsiyaadka sida weyn looga garanayo dalkaasi.
Mesfin ayaa si weyn looga arki jiray shaashadaha, xilligii Ciidamada Militariga Itoobiya ay gudaha u soo galeen Magaalada Muqdisho, daba-yaaqadii bishii December ee sanadkii 2006. Waana xilliga ay sida weyn magaciisa iyo muuqiisaba ay u barteen shacabka Soomaaliyeed.
Xukuumadda Addis Ababa ayaa Sabtidii sheegtay in Gobolka Tigreyga lagu qabtay sagaal xubnood, oo uu ka mid yahay Sebhat Nega. Ninkan ayaa ka mid ah Saraakiishii lafdhabarta u ahayd Ururkii TPLF, ee afgembiga dalkaasi kula wareegay, sanadkii 1991-kii.
Ciidamada Federaalka Itoobiya ayaa baacsi ku haya Saraakiishii TPLF, tan iyo markii bishii November ay Xukuumadda Addis Ababa ku gacan-seyreen inay isa soo dhiibaan, cafiska loo fidiyayna ay ka faa’iideystaan.